Ebe kachasị mma ị ga-eleta na !tali! - LucidPix
Ebe kachasị mma ị ga-eleta na !tali!
Na-achọ Europe n'oge ọkọchị? Anyị na-enye gị ndepụta kachasị nke ebe kachasị mma ị ga-eleta na !tali! Site na obere obodo gaa obodo ukwu, a mara Italytali maka ọmarịcha ọhụụ oké osimiri, ihu igwe na-ekpo ọkụ na enweghị mgbagha, nri ha dị ụtọ. Yabụ, kedu ụzọ ka mma isi gosi gị ebe kacha mma ịga na thantali karịa ịkekọrịta ha na 3D site na iji LucidPix.
Ikekwe ọmarịcha ama ama ama na Italy, Rome bụ ebe ụfọdụ ama ama ama gụnyere Koloseum, Trevi Fountain, Stefan Spanish na Vatican. Site na ileta ihe mgbe ochie na-eri Pizza na Piazza San Pietro (họọrọ votu # 1 kachasị mma na Rome), kwenyesie ike na ị gaghị anọ nkịtị n'oge njem gị.
Obere obodo a dị n'akụkụ ugwu na Amalfi Coast enwetawo ewu ewu n'etiti ndị na-ede blọgụ njem, ndị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na ọbụnadị. Ndị na - eme A-List na-adịbeghị anya ekele ya odida obodo. Oké osimiri na osimiri mmiri mmiri na-acha anụnụ anụnụ bụ ihe na-eme ka obodo a guzo na ya bụ akụkụ ndị Europe.
Obodo mara mma nke Florence bụ isi obodo mpaghara Italy nke Tuscany. Ọ dị ka nke Rome ebe ọ nwere ọtụtụ ihe mere eme na saịtị maka ndị njem na-ahụ ma kọwaa na ọdịbendị ndị Italiantali.
Ulo ejiji nke uwa, a bu Milan mara maka nnukwute nnabata ha nke eji ede ihe. N’atụghị uche, izu Ejiji Milan na-eweta Ndị ọbịa 20,000 gosiputara ibu ihe akachasi acho ka odi na onodu oge ogba.
Been gabuola n'otu n'ime ebe ndị a na ?tali? Cgbanwe foto njem gị gaa 3D site na iji LucidPix ma echefukwala itinye mkpado maka ohere iji gosipụta anyị Instagram!
Ndụmọdụ maka Nnukwu imalmụ anụmanụ →← Etu ị ga-esi mee foto Hoto, ya na LucidPix